विद्यार्थीको साथी बन्दै लर्डबुद्ध साकोस - Pradesh Dainik
विद्यार्थीको साथी बन्दै लर्डबुद्ध साकोस
पथरी, मोरङको पथरीशनिश्चरे २ मा रहेको लर्डबुद्ध साकोस विद्यार्थीहरुको साथी बन्न थालेको छ । सेयर सदस्य बाहेकमा पनि आफ्ना विभिन्न सामाजिक उत्तर दायित्व वहन गर्दै आएको लर्डबुद्धले २ जना विद्यार्थीलाई १ शैक्षिक वर्षका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको छ ।
हरेक वर्ष सामाजिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने १ जना छात्र र १ जना छात्रा गरी २ जनालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम लर्डबुद्धले ल्याएको साकोसका व्यवस्थापक गणेश राईले जानकारी दिएका छन् । यो शैक्षिक वर्षका लागि पथरीशनिश्चरे ७ को चन्द्र किराँतेश्वर माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छनोट गरिएको राईले जानकारी दिएका छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र रोल नं. ३ का योवन लिम्बू र कक्षा ९ मा अध्ययनरत रोल नं. ३ की जसमाया लिम्बू रहेका छन् ।
छात्रवृत्ति पाउने दुवैजना विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक रहको छ । योवनका बाबुको दुवै मृगौला फेल भएर निरन्तर डायलासिस गराइरहेका छन् । जसमायाको पनि आर्थिक अवस्था निकै नाजुक रहेको जनाइएको छ । उनिहरुलाई आवश्यक पर्ने पोशाक, कापी, डटपेन, ज्यामिती बक्स, पेन्सील, क्याल्कुलेटर, जुत्ता लगथाएतका सामग्री प्रदान गरिएको छ । कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र योवनका लागि ट्युसन तथा कोचिङ कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने रकम रु. १५ सय नगद समेत प्रदान गरिएको छ ।
छात्रवृत्ति वितरण गर्दै साकोसका अध्यक्ष धनराज राईले लर्डबुद्ध सहकारीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार शैक्षिक सामग्री सहयो गरिएको बताए । साकोसको यो नयाँ योजना अव निरन्तर अगाडी लगिने पनि राईले जानकारी दिएका छन् ।